कोरोना महामारीमै विदेश जाँदै युवा - Kantipath.com
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी अझ सेलाएको छैन । कतिपय मुलुक त बन्दाबन्दीमै छन् ।
नेपालमा भर्खर खोप अभियान शुरु भए पनि यसको त्रास कायमै छ तर कोरोना सन्त्रासकै बीच वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तेस्रो मुलुक जाने युवाको सङ्ख्या उत्तिकै छ ।
कोरोना महामारी शुरु भएयता सुर्खेतका एक हजार ३७३ युवाले राहदानी लिएका छन् । तीमध्ये ४९२ ले दु्रत माध्यमबाट राहदानी लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीशम्शेर रानाले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएकाले युवा विदेशिने क्रम नरोकिएको बताउनुभयो ।
“कोरोना महामारीमा घर फर्केका पनि महामारी नसकिँदै विदेशतिर गएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँघरमै रोजगारीको भरपर्दो अवसर पाएको भए विदेश जाने क्रम केही रोकिन्थ्यो ।” विदेशबाट फेर्केका युवालाई लक्षित गरी आयआर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्दा युवा पुनः विदेशतर्फ लागेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै श्रम तथा रोजगार कार्यालयले पछिल्लो छ महिनामा कर्णालीका २०० भन्दा बढी युवाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कर्णालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ९२६ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कार्यालय प्रमुख सुनिता दर्लामीले यो सङ्ख्या बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा दुई हजार २६ ले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिनुभयो ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिनेमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेशियालगायत खाडी मुलुक जाने छन् । खाडी मुलुकमात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या पनि बढी छन् ।
Previous Previous post: रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका उपकरण जडानमा ढिलाइ
Next Next post: भागरथी भट्ट हत्याकाण्ड : हत्यारा भेटियो, बलात्कारी भेटिएन
किन एकैपटक राजिनामा दिदैछन ४ हजार इन्जिनियर ?
एकैपटक ३३६ प्रहरी इन्स्पेक्टरको सरुवा : को कहाँ ? (सुचीसहित)
७९ सहसचिवको एकैपटक सरुवा : को कहाँ ? (सुचिसहित)
तीन किलोमिटर हुलाकी सडकमा कालोपत्रे हुन सकेन
१२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइँदै
प्रहरी जवान (जनपद) पदमा खुल्ला प्रतियोगिता अन्तिम नतिजा प्रकाशित (नतिजासहित )
नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरकाे सुनौलो अवसर (विज्ञापन सहित)
जापानले २ हजार ३ सय कामदार लैजाने ,आज देखि भाषा परिक्षा सञ्चालन
श्रम स्वीकृति अनिश्चितकालका लागि स्थगन
नेपालीलाई कुवेत जान रोक